N'ihe dị ka n'oge na-adịbeghị anya, ana m eche ọtụtụ echiche n'inye akwụkwọ ndị ọzọ na ọbụna ụfọdụ ikwu okwu n'ihu ọha na ịde blọgụ. N'ihi gịnị? Bloggin adịghị mfe! Ndị ụlọ ọrụ ghọtara nke a… itinye onwe gị 'ọtọ' na webụ nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo atụmatụ. E wezụga atụmatụ na ọdịnaya, agbanyeghị, bụ teknụzụ.
E nwere ndị na-erughị 30 njikọ na m blog peeji nke ihe na-eme. Naanị m chọrọ ị bulite ihe oyiyi maka blọọgụ ahụ ma merụọ ihe mgbagwoju anya maka foto profaịlụ. Ọ bụrụ n ’ị ga - ekwupụta onwe gị dịka ngwa ọrụ“ dị mfe ”maka ịde blọgụ, ị ga - amata na ọ dị mma ka ọ dị mfe. Onweghi uzo m gha akpo enyi m na ngwa a. Ọ ga-akara m mma ịgwa ha okwu WordPress or Blogger.
Ikekwe otu n'ime nsogbu ndị Vox bụ na ndị na-ede blọgụ na-emetụta ya maka ịde blọgụ. Ọ bụrụ na SixApart chọrọ n'ezie ịme usoro ịde blọgụ dị mfe, ha kwesịrị ịchọ ndị na-agụtụbeghị mbụ. Amaghị m ihe ọnụego nnabata maka ịrịgo Vox, mana m na-enwe obi abụọ na ha dị egwu.